फ्यूचर भिलेजको भूकम्प-प्रतिरोधी घर - China Radio International
फ्यूचर भिलेजको भूकम्प-प्रतिरोधी घर
(GMT+08:00) 2016-05-09 16:11:14
कटुञ्जे कहाँ पर्छ? त्यो तपाईँलाई थाहै होला। बेलाबखत सुन्ने गरेका छौं नि भक्तपुर, कटुञ्जे। होइन। तर कटुञ्जे त्यही एउटा मात्रै होइन रहेछ, है। तपाईँलाई थाहा थियो कि। कि तपाईँ उतै कटुञ्जेको पर्नु भयो। हुन त एक पटक ईन्टरनेटमा नेपाल खोज्दा इण्डोनेशियामा पो देखाइदियो। ए बाबा! एउटा एशिया महादेशको देशै अर्को दक्षिणपूर्वी एशियाको देशमा कसरी भन्ने नभएको पनि होइन। तर नेपाल भन्ने नामको त्यहाँ इण्डोनेशियामा एउटा ठाउँ रहेछ। यस्तै कटुञ्जे नामको ठाउँ काठमाण्डूबाट पूर्वको जिल्ला भक्तपुरमा मात्रै होइन रहेछ। काठमाण्डूबाट पश्चिमको जिल्ला धादिङ्गमा पनि रहेछ।
कुरा यस्तो हो----
भूकम्पपश्चात नेपालमा देशीविदेशी एनजिओ र आइएनजिओले पीडितको उद्धारमा काम गरेका थिए। हाल पनि गरिरहेका छन्। यस्तै-यस्तै सहयोगी विभिन्न सँघसंस्थामा चिनियाँ संस्थाहरू पनि धेरै-धेरै छन्। हालै अर्थात् नेपाल-भूकम्प गएको एक वर्ष पारेर यहाँ चीनको पैचिङ्गमा फ्यूचर भिलेज नामक एक संस्थाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। त्यस कार्यक्रम नेपालमा गएको भूकम्पपश्चात त्यही संस्थाले गरेको गतिविधीको छोटो व्याख्या थियो। यो पङ्क्तिकारलाई त्यस आयोजनास्थलमा पुगेपछि मात्र थाहा भयो, कटुञ्जे धादिङ्गमा पनि रैछ भन्ने। तर हालै सयौंको हाराहारीमा सर्प मरेको समाचारले यस ठाउँलाई धेरैबीच परिचित बनायो पनि। त्यो सँगै यस फ्यूचर भिलेजले पनि आउने दिनमा चिनाउने छ शायद।
फ्यूचर भिलेज आजभन्दा दश वर्षअघि त्यही धादिङ्गको कटुञ्जेमा स्थापित एनजिओ रहेछ। त्यसका एक तथा मुख्य सदस्य प्रोफेसर क्रिस्टी लाम चिनियाँ नागरिक हुन्। उनी एडिलेड यूनिभर्सिटीका विद्यार्थी हुँदा आफ्नो पीएचडी अनुसन्धानका लागि नेपालको कञ्चनपुर आएकी थिइन्। त्यस पछि पनि नेपाल ओहोरदोहोर गरिरहिन् र यसै क्रममा खोलिन्, फ्यूचर भिलेज।
अहिले यही फ्यूचर भिलेजले कटुञ्जेमा भूकम्पपीडितका लागि भूकम्प-प्रतिरोधक स्कुल र घरहरू बनाइदिएका छन्। भूकम्पले कटुञ्जे वडा न. नौमा ठडेको फ्यूचर भिलेजको घरसहित जम्माजम्मी 129 घरहरूमध्ये केही घरहरू छाडेर सबै घरमा ठूलो क्षति पुर्‌याएको थियो या भन्दा फ्यूचर भिलेजको भवन जस्तै भत्केको थियो। तर हाल त्यो फ्यूचर भिलेजको भवनसँगै स्थानिय गाउँलेका पनि पाँच वटा घर तयार भइसकेको छ र अर्को बीस वटा ठडिँदै छ। त्यस बाहेक यस संस्थाले त्यस गाउँमा थप सय वटा घर बनाउने योजना रहेको आयोजित कार्यक्रममा बताइयो। साथै गाउँलेहरूलाई भूकम्प-प्रतिरोधक फ्रेम उपलब्ध गराउने र गारो ठड्याउने लगायतका सामग्री र मजदुरी आफैले बेहोर्नुपर्ने या भन्दा आफै स्वयमले निर्माण गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ। र यस कार्यमा अर्थात् भूकम्प-प्रतिरोधक फ्रेम उपलब्ध गराउने कम्पनि चीनको सछ्वानमा अवस्थित छ र यसको नाम हो - डिजाइन फर पिपल कम्पनी लिमिटेड। चीनको मुख्यभूमिमा डिजाइन फर पिपल र चीनको थाइ वानमा एटिलियर-3को नामबाट सन् 1999मा स्थापित यस संस्थाले स्थापनाकालदेखि नै भूकम्प-प्रतिरोधक घर बनाउँदै आएको छ। यस कम्पनिका प्रमुख डिजाइनर हुन्- शेन यिङ छुन।
उनको यो संस्थाले भूकम्पपश्चात थाइ वान, यून्नान, तथा सछ्वानमा यस्ता भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरिरहेका छन्। त्यसै गरी हनानलगायतका अरु ठाउँमा होटेल, रिसोर्टका रुपमा पनि यस्ता घर निर्माण गर्दैआएका छन्। समयको गतिसँगै यस किसिमको फ्रेम पनि विकसित हुँदैआएको उनले बताए। पहिला-पहिला फ्रेम खडा गर्दा वेल्डिङ्ग गर्नुपर्थ्यो। अब मात्रै नटबोल्ट कसेर खडा गर्नसक्ने बताए। यस्ता फ्रेम जो कसैले ठड्याउन सक्ने र सछ्वानमा मात्र महिलाको समूहले घर ठड्याएको छोटो भिडियो पनि प्रदर्शित गरिएको थियो। तर त्यस्तो होइन सर्वप्रथम दक्ष व्यक्तिले यसको जडान गर्ने तरीका सिकाएपछि यो खडा गर्नमा कुनै समस्या नआउने बताइयो। त्यहाँ देखाएका तस्विर तथा भिडियोमा दुई तल्ले घर देखिएकोले कति तल्लासम्मको बनाउनसकिनेछ भन्ने यो पङ्क्तिकारको जिज्ञासा मेट्दै डिजाइनर शेनले भने- 'चार तल्लासम्मको छ र हाल दक्षिण अमेरिकी देशमा यस सम्बन्धमा काम भइरहेको छ।' थाइवानमा सन् 1999को थाइवान भूकम्पपछि 400 वटा यस्ता भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरेको यस संस्थाले हालसम्म समग्रमा चीन, नेपाल, फिलिपिन्सलगायत दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा गरी 3, 000 वटा घर निर्माण गरिसकेका छन्।
यसै संस्थाका मार्केटिङ्ग डाइरेक्टर जेफ ह्वाङ्गलाई नेपालमा भूकम्पको खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै छ र धक्का तथा पराकम्पन निरन्तर गइनै रहेको छ यस अवस्थामा नेपालमा यस्ता घरको माँग बढ्नसक्ने देखिन्छ। के छ व्यापार-व्यवसायको योजना भन्दा उनले त्यो अवसर छ तर यस फ्रेमको मात्र तीस हजार यूआन पर्ने त्यस माथि ढुवानी खर्च लाग्ने हुँदा कसै कोहीले माँग गरेपछि मात्र यस बारेमा सोच्न सकिने बताए। उनले भने- 'यो नितान्त सहयोग हो। त्यस तर्फ सोचेका छैनौं। प्रो. क्रिस्टी लाम आफ्नो संस्था रहेको गाउँ पुनःनिर्माण गर्न सहयोगका लागि भौतारिँदै थिए र हामीसँग भेट भयो, हामीले सहयोग गरेका हौं।'
प्रोफेसर क्रिस्टी लाम हाल जापानको ओशाका विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक छिन्। उनी आफ्नो पढाइको सिलसिलामा नेपाल आएता पनि नेपाल प्रतिको लगाव यसबाट झल्किन्छ कि उनले त्यहाँ बालबच्चालाई पढ्न-पढाउन तथा स्कुल निर्माणमा मात्र सहयोग सिमित राखेनन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कटुञ्जेको पुनःनिर्माणलाई आफ्नो काँधमा थापिन्। उनी आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद नेपालका लागि लागीपरेकी छिन्।
यस्ता गुणी मानिसले संसारमा जीवनयापन सहज बनाइराखेका छन् भन्दा अतियोक्ति नहोला। यस्ता सहयोगी हात र मनलाई नमन। साथै चिनियाँ सरकारले भूकम्पपछि तत्कालै सहयोगको हात बढाएको थियो र त्यसै गरी धेरै-धेरै चिनियाँ सँघसंस्था तथा व्यक्तिगत तवरमा पनि नेपाललाई सहयोग गरे र गरिरहेका छन्। यस्तै सहयोगी हातहरू मध्ये प्रो. क्रिस्टी लाम र उनको संस्था फ्यूचर भिलेज र डिजाइन फर पिपल पनि हुन्। यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि चिनियाँ सरकारमात्रै होइन चिनियाँ जनताको पनि नेपालप्रति लगाव धेरै छ। (यी तस्वीरहरु सबै लेखक स्वयंले खिचेका हुन्।)